लुम्बिनी कांग्रेसमा शाह र पुनद्धारा प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता : कसले मर्ला बाजी ? – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured लुम्बिनी कांग्रेसमा शाह र पुनद्धारा प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता : कसले मर्ला बाजी ?
बुटवल : नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्र्तगत लुम्बिनी प्रदेशका लागी रुपन्देहीका भरत कुमार शाह र रुकुमका अमर सिंह पुन बिच नेतृत्वको लागी भिडन्त हुने भएको छ । यी दुवै जनाले प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापन पक्षबाट सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भरत कुमार शाह रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ५ का नेता हुन् । संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा ठूलो मतान्तर सहित विजयी शाह बलियो उम्मेदवारको रुपमा रहेका छन् । पौडेल पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका रोल्पाका अमर पुन रोल्पाका पूर्व जिल्ला सभापति हुन् ।
साथै प्रदेश सभापतिमा दुवै पक्षका उम्मेदवार दुवैजना पूर्व राज्यमन्त्री पनि हुन् । जिल्लाको तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा रामचन्द्र पौडेल पक्ष बलियो देखिएको छ । तर दुवै पक्षले आफु बलियो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । भरत कुमार शाहको प्यानलमा २ जना उपसभापति पदका लागि कपिलवस्तुका सुधाकर पाण्डे र दाङका राजु खनालले उम्मेदवारी दिएबा छन् ।
यस्तै महामन्त्रीमा पनि २ पदको लागि बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना र प्युठानका खिमानसिंह रायमाझीले उम्मेदवारी परेको छ । सह– महामन्त्रीमा १ महिला सहित ३ पदको लागि रुपन्देहीकि सरिता चौधरी बाकेकि माया पुन र बाकेकै लक्ष्मी नारायण शाहले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र पेश गरेका छन् ।
यस्तै पुनको प्यानलबाट उप–सभापति पदका लागी गुल्मीका भुवन प्रसाद श्रेष्ठ र रुपन्देहीका अष्टभुजा पाठकले उम्मेदवारी दिएका छन् । महामन्त्री पदको लागी पश्चिम नवलपरासीका विक्रम खनाल र कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज आचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सह–महामन्त्रीका लागी प्युठानकी निमा गिरी, अर्घाखाँचीका विष्णु खनाल (मुसकान) र दाङका खगराज पान्डेयले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसार तिव्र बनाएका छन् ।
एउटै पार्टीबाट गुट बनाएर उम्मेदवारी दिए पनि मतदाताहरुले यसलाई स्वाभाविक भएको बताएका छन् । महाधिवेशनको क्रममा मात्र गुट देखिने र यस यसले कांग्रेसलाई अझै मजबुद बनाउने उनिहरुको जिकिर रहेको छ । सबग्र कार्यकर्तालाई गुट उपगुट नभनि सबैलाई संगै लैजाने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४ औ अधिवेशन अन्तर्गत भोलि बिहान ८ बजे देखि मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ । -रासस